Aabo dhalay askari Maraykan ah oo dhintay oo diiday in uu la kulmo Trump - iftineducation.com
iftineducation.com – Aabo dhalay askari Maraykan ah oo lagu dilay hawlgal lagu bartilmaameedsanayay dad looga shakisnaa Al-Qaacidda oo ku sugnaa guri ku yaalla Yemen ayaa sheegay in uu diiday in uu la kulmo madaxweyne Donald Trump, ka dib markii maydka wiilkiisa lagu soo celiyay dalka Maraykanka.
“Waan ka xumahay, ma doonayo in aan arko,” wuxuu sheegay in uu wakhtigaas sidaa ku yiri wadaado.
Hawlgalkii dhacay 28 Janaayo ayaa ahaa kii koobaad ee fasaxay Trump.
Bill Owens oo dhalay William “Ryan” oo la dilay ayaa wargeyska Miami Herald u sheegay in hawlgalkaasi uu ahaa doqonimo, maadaa uusan madaxweynuhu xafiiska joogin “xataa todobaad”. Sabab?” ayuu ku yiri waraysigaas wargeyska oo Axaddii la daabacay.
Trump ayaa weerarkan ansixiyay markii uu xilka hayay lix maalmood oo kali ah, waxaa la rumaysan yahay in ay ku dhinteen dad shacab ah oo ay ka mid yihiin carruur.
Saddex ruux oo kale oo Maraykan ah ayaa ku dhaawacantay weerarkaas, qorshaha weerarkaas ayaase billawday markii uu Maraykanka ka arriminayay maamulkii Obama.